Izibonelelo ezi-8 eziyimfihlo zokusela iwayini ebomvu - Iwayini Ne Impilo
Izibonelelo ezi-8 eziyimfihlo zokusela iwayini ebomvu
Ukusukela ekuqaleni kweminyaka yoo-1990, amajelo eendaba ebesoloko egcwele iingxelo malunga nezibonelelo zewayini ebomvu. Nangona kunjalo, kunokuba nzima kubaseli bewayini ukulungisa izinto kwi-hype. Zininzi izifundo zenzululwazi ngalo mbandela, kwaye iziphumo zinokukunceda uqonde ukuba ngaba ukusetyenziswa ngokulinganayo kwewayini ebomvu kunokukunceda ukuphucula impilo yakho.
IziBonelelo zezeMpilo ezisibhozo zeWayini ebomvu
Ngokwe- Ikliniki yaseMayo Kusenokwenzeka ukuba iwayini ebomvu inezibonelelo zempilo ngakumbi kunalo naluphi na olunye uhlobo lotywala. Oku kungenxa yenani lezinto ezikule wayini. Ibandakanya i-polyphenol antioxidants, iikhemikhali ezenzeka ngokwendalo ezinokunceda ukulwa uxinzelelo lwe-oxidative emzimbeni kwaye zikhokelele kwinani lezibonelelo zempilo ezibalulekileyo. Ezi zimbini ze-antioxidants, i-resveratrol kunye ne-flavanoids, inokuba nefuthe elibonakalayo kwimpilo yabantu. I-Resveratrol, ngakumbi, ivela kwizikhumba zeediliya, ezishiyekileyo ngexesha lokuvunda kwewayini ebomvu kwaye zisuswe kwiwayini emhlophe.
Izibonelelo ezili-10 zeMpilo yokusela iwayini
Iifoto kunye nolwazi lweentlobo ezili-9 zewayini ebomvu ebomvu
Iwayini ebomvu inokuyiphucula impilo yakho ngezi ndlela zilandelayo.
Esinye sezibonelelo zewayini ebomvu esidumileyo sisiphumo sayo kwimpilo yentliziyo. Uphando lupapashwe kwiphephancwadi Indalo ifumanise ukuba ukusetyenziswa kwewayini ebomvu kunxulunyaniswe nomngcipheko omncinci wokudumba kunye nesifo semithambo, kunye nethuba elincitshisiweyo lokufa sisifo sentliziyo. Ikwafumanise ukuba iwayini ebomvu eveliswa ngokweendlela zesintu ezandisa inani le-resveratrol kunye ne-flavanoids ewayinini ibhetele kunezinye iindidi ekuphuculeni impilo yentliziyo.
Inkqubo ye- Umbutho wentliziyo yaseMelika Uqhube uphononongo loncwadi kwesi sihloko kwaye wafumanisa ukuba ukusetyenziswa ngokulinganayo kwewayini ebomvu, echazwa njengeiglasi enye ukuya kwezimbini ngosuku, kunokunciphisa umngcipheko womntu wokuhlaselwa sisifo sentliziyo malunga neepesenti ezingama-20. Iwayini ebomvu inciphisa i-LDL (i-cholesterol embi) kwaye inyusa i-HDL (icholesterol elungileyo).
Ukwaluphala okuCothayo kunye noKwandiswa kweXesha lokuPhila
Usenokuba ulivile ibango lokuba into ekwiwayini ebomvu inciphisa ukuguga kwaye inokunyusa ixesha lokuphila. Kukho inani lezifundo kwesi sihloko kule minyaka idlulileyo.
Ngokwokuphononongwa koncwadi olupapashwe kwi Ukuphononongwa kwentliziyo , Izifundo ezininzi ziye zafakazela ukuba i-resveratrol ngokukodwa inokuvula ukubonakaliswa kohlobo oluthile olunxulunyaniswe nokuphila ixesha elide. Inokunciphisa nomnye umonakalo obangelwe yinkqubo yokwaluphala kwendalo, ngakumbi njengoko ichaphazela intliziyo. Nangona kunjalo, kwizifundo ngeempuku, i-resveratrol ayikhange yongeze ubomi beempuku. Nangona ixesha elide lokuphila linxulunyaniswa nokusetyenziswa kwewayini ebomvu kwimimandla ethile yaseFrance, kufuneka uphando oluninzi ukumisela ukuba ichaphazeleka kangakanani impilo yomntu.
UkuCothiswa kwesifo se-Alzheimer
Iwayini ebomvu inokunceda ekucothiseni inkqubela phambili yeSifo se-Alzheimer; Nangona kunjalo, uphando kule ndawo lusaqhutywa. Ngokophando olupapashwe kwiphephancwadi IiSayensi zoBomi Ukutya iwayini ebomvu eyenziwe ngediliya enesikhumba esimnyama kunciphisa umonakalo we-oxidative kwaye kunokuba nefuthe kwimithambo-luvo. Abaphandi bavakalelwa kukuba ngokuqhubeka nokufunda, izinto ezikwiwayini ebomvu zinokungqinwa ukuba ziyanceda ukucothisa inkqubela phambili kunye nokuthintela ukonakala kwemithambo-luvo okunxulunyaniswa ne-Alzheimer's.
Icandelo lesibonelelo sempilo yewayini ebomvu livela kwisakhono sayo sokunciphisa ukudumba emzimbeni, kodwa kukho ezinye iimpembelelo zokunciphisa ukudumba. Uphononongo olupapashwe kwi Ijenali yaseMelika yeeNzululwazi zeBiomedical ukufumanisa ukuba ukusetyenziswa kwewayini ebomvu nako kunceda ukukhusela abaguli kwimpendulo yokuvuvukala ehambelana nosulelo olunzulu. Oku kunokunciphisa umonakalo wexesha elide kwimpendulo ephezulu yomzimba yokuzikhusela emzimbeni.
Uthintelo loMhlaza kunye noNyango
I-resveratrol kwiwayini ebomvu ikwabonakalisiwe ukunceda kuthintelo kunye nonyango lwee-cancer ezithile, ngokwenqaku elipapashwe kwi Uphengululo oluBalulekileyo kwiSayensi yezoKutya kunye nesondlo . Zininzi izinto ezibalulekileyo kwesi sibonelelo:
bathanda ntoni abafana abakwishumi elivisayo
I-Resveratrol kwiwayini ebomvu inokukhusela kumonakalo obangelwe zii-carcinogens.
Inokumisa amathumba ekubeni aqale ukukhula.
Ingakucothisa ukusasazeka kweeseli zomhlaza emzimbeni kwaye kuthintele ukukhula kwezidumba ezikhoyo.
Inokuthintela ukuguquka kweeseli ezinomhlaza ezinokuthi zinganyangeki kwi-chemotherapy.
Nangona kusekuninzi okunokufunyanwa malunga nokusetyenziswa kwewayini ebomvu kwisifo seswekile esele sifunyenwe, uphononongo loncwadi kwi Ijenali yezoNyango ngezoNyango ifumanise ukuba utywala kwiwayini ebomvu bunokuthintela isifo seswekile. Nangona kunjalo, esi siphumo sinokungapheleli kwiwayini ebomvu. Inqaku liyaphawula ukuba esi sibonelelo sothintelo kunokwenzeka ukuba sinxulunyaniswe nokusetyenziswa gwenxa kotywala nangaluphi na uhlobo.
Ukuncitshiswa kokuValwa kwegazi
Ukuphononongwa ngokufanayo koncwadi kwi Ijenali yezoNyango ngezoNyango kubonise ukuba izinto ezikwiwayini ebomvu zanciphisa umngcipheko wamahlwili egazi. Amahlwili egazi sesinye sezizathu eziphambili zokubetha.
Ukuthintela ukubola kwamazinyo
Iwayini ebomvu inokunceda ekuthinteleni ukubola kwamazinyo. Ngokwenqaku elikwiphephandaba Uluvo lwangoku kwi-Biotechnology , Ukutya kunye neziselo ezininzi kubonisiwe ukunciphisa izehlo zokubola, okanye imingxunya, kubantu abazityayo. Okunye kokutya yayiyiwayini ebomvu.
Yimalini Iwayini ebomvu omele uyisele?
Ukukhonza ii-ounces ezine ukuya ezintlanu.
yintoni onokuyixuba ne-coconut rum
Kuzo zonke izifundo, oososayensi bafumanise ukuba ukusela kakhulu iwayini ebomvu kunokubangela uninzi lwezibonelelo zempilo. Nangona kunjalo, kunokuba nzima kubaseli bewayini ukuba bazi ngokuthe ngqo ukuba bangakanani na abatya ukuze babone izibonelelo konke konke. Ngoku ka Isibhedlele saseYale-New Haven (YNHH), kuxhomekeke kwisini sakho:
Amadoda, ahambisa utywala ngokukhawuleza kunabafazi, kufuneka asele iiglasi enye ye-4 ukuya kwezi-5 zeewayini ezibomvu ngosuku.
Abasetyhini kufuneka banciphise ukusetyenziswa kwabo kwi-ounce enye ekhonza ngosuku.
I-YNHH ikwaphawula ukuba abantu abangaseli tywala ngoku akufuneki bazive ukuba kufuneka baqale ukusela ukuze babe sempilweni. Kukwabalulekile ukuba ujonge nogqirha wakho ukuze akhuphe naziphi na iingxaki zempilo ezinokuthi zandiswe kukutya iwayini.
Akungabazeki ukuba iwayini ebomvu inezibonelelo ezininzi zezempilo, kodwa ezo zibonelelo zisebenza kuphela xa usela iwayini ngokumodareyitha. Ukuqonda izibonelelo zempilo ezinokubakho kunye nenani lewayini ebomvu enokuthi incede kubalulekile ekwenzeni izigqibo ezifanelekileyo malunga nokuba ukusetyenziswa kwewayini rhoqo yinto ofuna ukuyifaka kwisidlo sakho esisempilweni.
Freebies And Product Sampuli I-African American Izinwele Iimpawu Umntwana Umbala Wenwle Malunga Ukubhala Ukubhala
indlela yokuhlela imifanekiso eludongeni ngokwamaqela
indlela yokukhupha iinzipho kwihempe
ndingayifumana impungutye njengesilo-qabane
Ngaba i-microwave ibulala i-coronavirus
lithetha ntoni ilangatye eliluhlaza
ukuba uzothini kumntu ofayo